पाठेघर क्यान्सर सिमा शिरिसलाई आर्थिक सहयोग गरिदिन अपिल – Mission
पाठेघर क्यान्सर सिमा शिरिसलाई आर्थिक सहयोग गरिदिन अपिल
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १ कार्यालयद्वारा आर्थिक सहयोग गरिदिन अपिल गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिका १ मा रहेका ४० वर्षिया सिमा शिरिस मगरको विगत पाँच वर्षदेखि पाठेघरको क्यान्सर भएको थियो । विभिन्न क्षेत्रलाई सहयोगको लागि अपिल गरेको छ ।
यसै क्रममा बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले ३० हजार रुपैया सहयोग गरेका छन् । सोमबार एभरेष्ट युथ स्पोर्ट क्लबको समन्वयमा सो अर्थिक सहयोग गरिएको हो । उनको विगत विगत पाँच वर्षदेखि पाठेघर क्यान्सर भएको थियो । कोहलपुर नगरपालिकामा उनी पहिले अटो चालक हुन् ।
अहिले उनको अटो समेत उपचार गर्नका लागि अटो समेत विक्रि गरिसकेकी छु उनले भनीन तर अब म संग अरु केही पनि छैन् । उनको परिवारमा ४ जनाको परिवार रहेको छ । उनको एक छोरा र एक छोरी रहेका छन् । उनलाई सहयोग गर्नका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. को १२०२१६००५५७६३१०००००१ मा रकम जम्मा गर्ने सकिनेछ । त्यसको लागि सम्पर्क नं. 9822407894, 9825568609 मा गर्नु अुनरोध गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार १६, २०७७ 2:19:45 PM |
Prev‘कोहलपुर गतिशिल रुपमा अघि बढ्न सकेन’
Next‘सत्ता परिवर्तन भए तर शोच परिवर्तन भएन’